Nezvedu - Nantong SuTong Kuparadzana Technology Co., Ltd.
Demister / mhute Eliminator
mafuta & mweya
Pedza Gas Desulfurization
musha » Nezvedu
Nantong Sutong Kuparadzana Technology Co., Ltd. (hereinafter: SUTONG) iri boka specialized pamasikiro uye anogadzira zvinhu shongwe internals, chiputiriso, shongwe dzacho uye chirongwa simba okuponesa. Kunyanya kuva kurimwa, bvunzo uye ouinjiniya basa vakawanda kuchinjwa nekupatsanurwa muna Chemical, Petrochemical, Refinery, fotereza, mafuta & Gas uye Environmental Protection nharaunda. The akakodzera pezvakaitwa zvinosanganisira rectification, Absorção de Água, dzokubudisa, patsva, Kusimuka kwemvura, nokutorera uye tsvina mvura pakurapa reshongwe kuparadzana, uyewo kusanganisira magadzirirwo guruva Sefa uye demister ari Environmental Protection. Tinogona kupa zvikuru nyanzvi Engineering & Technology basa, vagadzirise zvakawanda zvakaoma Engineering matambudziko munzvimbo dzakasiyana.
SUTONG munhu National yepamusorosoro kambani, ari nominated nokutengesa Sinopec Group, ari nominated boka National Technology Centre Chemical Engineering Design, pakutsvakurudza uye kukura chawo uye chete nominated akaigadzira Nanjing University Separation Division, ari nominated mugadziri kuEast China University of Science and Technology. Nesuwo yakasimbiswa pamwe ushamwari rakakurumbira Design Institutes uye Scientific Research Institute.
Tinopa yakakwana waishandiswa Consulting, ouinjiniya patani, kugadzwa, nokutumwa bvunzo uye kiyi-akanunura chirongwa, kupa hwose garandi kune ashandiswe chirongwa. We zvinopa nemakasitoma dzedu zvakanakisisa akatemerwa mutengo shongwe chiputiriso, dzacho uye shongwe internals vane unhu hwakanaka, hunobatsira utility uye yakakwirira - kunyatsoshanda. Tinogona kupa hanya basa, uye vanoita nokukurumidza kumusika nokuti kutsvakurudza.
* School-mhanya Enterprises, pamberi 1986
tsvakurudzo & Zvibereko Direction: Random packings
* Pakuunganidza Dzechikoro-mhanya Enterprises, SUTONG kutanga. 1986
tsvakurudzo& zvibereko Direction: Random packings & muronga packings
* Vanoitawo bhuku Tower kurongedza Technical Manual. 1995
tsvakurudzo& zvibereko Direction: Professional shongwe internals uye packings
* Kubva chete kugadzira kune unyanzvi hwokugadzira. The 1st kubviswa, nekaviri pakafunuka, chokufuka kupfuura 13340 m2. 2003
Pamwe Kuparadzana Research Centre Nanjing University& East China University of Science and Technology. SuTong R&D Department rakavambwa, ari vamire kanzuru chairema CIESC Journal. Kubatana National Chemical Design& Technology Center.
* The 2nd kubviswa, nekaviri pakafunuka, chokufuka kupfuura 26680 m2. 2010
Itaiwo pakupfuura Design, zvinopa urongwa pasuru. Kuzivisa nyika yepamusorosoro Enterprise zvinobudirira. Rava nominated nokutengesa Sinopec Group. Pamwe Tsinghua University uye kukudziridza matsva mhando packings.
* The 3rd kuwedzera, akasuma yose kutungamirira dzaFord, muunganidzwa mari pamusoro 8 miriyoni rmb.
* Zvakatsaurirwa muna tsvakurudzo & budiriro kumugwagwa nyanzvi Mbiru internals uye packings dzose nguva.
Itaiwo Munguva 2018 ACHEMA (Booth No. E42-4 In Hall 5.1) ...
wakagadzirirwa 2018 ACHEMA
Teken zita renyu uye paemail kuwana ichangobva Sutong reserved.
Copyright © 2017 Nantong SuTong Kuparadzana Technology Co., Ltd. All rights reserved.备案 号:苏 ICP 备 12029206 号